တင်ဒါရလဒ်ပြုလုပ်ခြင်း Eryaman Hizmetev Landscaping - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeလေလံပွဲလေလံရလဒ်များကိုEryaman Hizmetev Landscaping တင်ဒါရလဒ် Making
03 / 09 / 2019 Levent Elmastaş လေလံရလဒ်များကို, လေလံပွဲ, အထွေထွေ 0
တင်ဒါရလဒ်လုပ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် duzenlemesi ၏ eryaman hizmetev
တူရကီပြည်နယ်မီးရထားအုပ်ချုပ်ရေးxnumx.bölgညွှန်ကြားမှု (TCDD)2/ 2018 JCC အမှတ် Eryaman Hizmetev Landscaping တင်ဒါအဆိုပြုလွှာ ERGEZEN တည်ဆောက်နေ Trading Company Limited ၏အလုပ်ပေးထားသော£ 692704 ပြုလုပ်ခြင်းရာ 11.064.339,61 TL လောက်ကုန်ကျစရိတ်ရရှိခဲ့သည်။
နူးညံ့သော, 34.400 သံရထားလမ်းအမျိုးအစားအားလုံးကို, handrails စသည်တို့ကိုအလှဆင် (က perforj) ပြုမိကုန်ထုတ်လုပ်မှုနှင့်အစားထိုး (လှေကားသံ, သဘောထားပြင်းထန်, partitions ကို, စတာတွေမဆိုကြင်နာ) အလှဆင်မြင့်နှင့်အခြားတာဝန်များကိုပါဝင်သည်ကီလိုဂရမ်။ ပေးပို့အလုပ် 150 (တရာငါးဆယ်) ပြက္ခဒိန်ရက်ပေါင်းထံမှကြာချိန်။
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Eryaman Hizmetev Landscaping လုပ်ခြင်း 14 / 01 / 2019 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2၏ TC အထွေထွေညွှန်ကြားရေးမှူးပြုလုပ်ခြင်း Eryaman Hizmetev Landscaping ။ စီမံခန့်ခွဲရေး SERVICE ကိုတစ်ဝိုက် ERYAMAN HİZMETEV Landscaping purchasing ဘယျအရာဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အများပြည်သူဝယ်ယူရေးဥပဒေနှင့်အညီပွင့်လင်းလုပ်ထုံးလုပ်နည်းအမှတ် 4734 19 အပိုဒ်များကချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2018 / 692704 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Anadolu Boulevard Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခမှတဆင့်) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3122111449 - 3122111225 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumx.bolgesatinalma@tcdd.gov.t ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်း က) သဘာဝတရား, အမျိုးအစားနုမှ https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-ဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ဘာသာရပ်နှင့် ... : အင်တာနက်လိပ်စာများကိုတွေ့မြင်နိုင်ပါသည်
Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ် eryaman Access ကို 01 / 02 / 2019 Eryaman Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံတူရကီပြည်နယ်မီးရထား2၏ Access ကိုစာချုပ်ဆုကိုတည်ဆောက်ခြင်း။ ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 2019 / 19040 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 668.783,80 TL နှင့် 869.603,72 ၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့် ပတ်သက်. ကုမ္ပဏီတစ်ခုကကမ်းလှမ်းမှုကို5ဖို့နှုန်း Eryaman Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံ Access ကိုစီးပွားရေးနူးညံ့အားပေးတော်မူပြီနဲ့£ 700.000,00 သတ္တုရိုင်းဆောကျမှုစက်မှုလုပ်ငန်း SAN လေလံဆွဲမရနောက်ဆုံးရလာဒ်များအရသိရသည်စာချုပ်ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ နေကြပါပြီလိုက်သည်။ , LTD ။ STI ။ ကုမ္ပဏီရရှိထားပြီးပါပြီ။ နူးညံ့သော, 1 ယူနစ်, အဆောက်အဦး (စုစုပေါင်းအရေအတွက်က 154 1 မီးဖိုအစာကျွေးမယ့်လမ်းအတွက်တိုက်ခန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတိုက်ခန်းမီးဖိုချောင်-type အမျိုးအစားယူနစ် (အိမ်သူအိမ်သား) ၏ပါဝင်သည်) နှင့်ဗဟိုဖြစ်ပါတယ် (kwxxnumx စုစုပေါင်း = 6504KW ရာအရပျ premix burner ...
Eryaman Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံ Access ကိုစီးပွားရေးလေလံရလဒ် 27 / 03 / 2019 တူရကီပြည်နယ်မီးရထား TCDD2၏ Eryaman Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံ Access ကိုစီးပွားရေးတင်ဒါရလဒ်။ တင်ဒါအဆိုပြုလွှာသတ္တုရိုင်းဆောကျမှုစက်မှုလုပ်ငန်း Industries Ltd ၏အလုပ်ပေးထားသော Eryaman Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံ Access ကို£ 2019 နှုန်း 19040 အကြောင်းကိုကုန်ကျသည့်ဒေသဆိုင်ရာပစ္စည်းဝယ်ယူရေးဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု (TCDD) 869.603,72 / 700.000,00 JCC နံပါတ်, ကုမ္ပဏီနှင့်အတူစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ နူးညံ့သော, 1 ယူနစ်, အဆောက်အဦး (စုစုပေါင်း 154 ယူနစ်မီးဖိုအစာကျွေးမယ့်လမ်းအတွက်တိုက်ခန်းများနှင့်တစ်ဦးချင်းစီတိုက်ခန်း 1 စုစုပေါင်းအစားအစာအမျိုးအစား (အိမ်ပြန်) ၏ပါဝင်သည်) နှင့်ဗဟိုဖြစ်ပါတယ် (ဘွိုင်လာ condensing အာဟာရထိုကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်နေရာအရပ်အမျိုးအစား၏ 650 kwxxnumx စုစုပေါင်း =4KW premix burner) သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အဦများဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အကိုင်များ ဒါဟာဖုံးလွှမ်း။ ဖြန့်ဝေ၏လုပျငနျးရာအရပျ၏ကြာချိန် ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Eryaman Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံ Access ကိုအလုပျ 11 / 01 / 2019 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD)2၏ Eryaman Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံ Access ကိုစီးပွားရေး TC အထွေထွေဒါရိုက်တာ။ purchasing စီမံခန့်ခွဲရေး SERVICE ကိုတစ်ဝိုက် Eryaman Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံ Access ကိုစီးပွားရေးဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ပြည်သူ့ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးအက်ဥပဒေ၏အပိုဒ်အရသိရသည်အိတ်ဖွင့်တင်ဒါအမှတ် 4734 19 နေဖြင့်ချီးမြှင့်ပါလိမ့်မယ်။ နုနှင့် ပတ်သက်. အသေးစိတ်သတင်းအချက်အလက်များကိုအောက်ဖော်ပြပါနေကြသည်။ တင်ဒါမှတ်ပုံတင်ခြင်းအရေအတွက်: 2019 / 8863 1-အုပ်ချုပ်ရေးက) လိပ်စာ: Anadolu Boulevard Behicbey YENİMAHALLE / တူရကီခမှတဆင့်) တယ်လီဖုန်းနှင့်ဖက်စ်နံပါတ်: 3122111449 - 3122111225 ဂ) E-Mail ကနေရပ်လိပ်စာ: xnumx.bolgesatinalma@tcdd.gov.t ဃ) တင်ဒါစာရွက်စာတမ်း အင်တာနက်လိပ်စာများတွင်တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်: နုဆောက်လုပ်ရေးအလုပ် https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ 2-ဘာသာရပ် ...
ဖျော်ဖြေမှုလုပ်ငန်းဘူတာလေလံရလဒ်မှာတွေ့ရှိPozantıဖျော်ဖြေဆောက်လုပ်ရေး Hizmetev 12 / 09 / 2018 Pozantıအတွက်ကွင်းဆင်းဘူတာ Hizmetev တင်ဒါပြန်လည်မွမ်းမံများအတွက်အစီအစဉ်များပြုလုပ်ခြင်း၏ 5, 6, 8 နှင့်9Noli စီးပွားရေးတွေ့ရှိခဲ့ TC ပြည်နယ်မီးရထား TCDD6ရလဒ်များ။ ဒေသဆိုင်ရာယ်ယူခြင်းနှင့် 2018 / 404061 JCC အရေအတွက်ကန့်သတ်ချက်တန်ဖိုးကို 418.888,80 TL နှင့်ဘူတာ Yard အတွက်Pozantı 570.700,44, 5,6နှင့် 8 Plan ကိုအမှတ် Hizmetev အဆိုပါပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းတင်ဒါ9ကုမ္ပဏီများမှဆိုရင် single ၏ဆောက်လုပ်ရေးကိုတွေ့ရှိပြီးစာချုပ်4TL ချီးမြှင့်ခဲ့သည့် 442.731,41 TL လောက်ကုန်ကျစရိတ်၏ Inventory Control ကိုဝန်ဆောင်မှုညွှန်ကြားမှု ဆောက်လုပ်ရေး TAAH.T Toktamışအဆိုပြုချက်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ NAK ။ har ။ Jun ။ အင်္ဂတေ SIZE ။ I. , LTD ။ STI ။ + ပု HAF တည်ဆောက်နေ HAKSEVER ။ TURZ ။ TAAH ။ SAN ။ နေကြပါပြီ့ ... ။
Eryaman Hizmetev Landscaping
အဆိုပါ Samsun-Sivas ၏ဆောက်လုပ်ရေးလက်အောက်တွင်စက်တင်ဘာလ41913: သမိုငျးတှငျယနေ့တွင်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Eryaman Hizmetev Landscaping လုပ်ခြင်း
Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံတည်ဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတင်ဒါရလဒ် eryaman Access ကို
Eryaman Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံ Access ကိုစီးပွားရေးလေလံရလဒ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Eryaman Hizmetev သဘာဝဓာတ်ငွေ့အခြေခံအဆောက်အအုံ Access ကိုအလုပျ
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: ရုံး Depot Ulukışla Landscaping ပြုသောအမှု
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: DATEM ကျောင်းပရဝုဏ် Landscaping လုပ်ခြင်းလုပ်ငန်း
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: သားမွေးဘူတာအမှတ် 52 နှင့်အိမ်ရာ Panel ကိုခြံစည်းရိုးပြုလုပ်ခြင်းလုပ်ငန်းခွင်နှင့်အတူန်းကျင်ပြန်လည်မွမ်းမံ 61 Hizmetev
Amasya ဘူတာအဆောက်အအုံစီးပွားရေး Landscaping နဲ့အခင်းအကျင်းလေလံရလဒ်
ဂိမ်း (အရှေ့လိုင်း) လမ်းသွားလမ်းလာ path and Landscaping ချမှတ်ခြင်းသံသယဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်ııı.aş BHRS